के तपाईं पढेको कुरा लामो समयसम्म सम्झिन चाहानुहुन्छ ? यस्ता छन् स्मरण शक्ति बढाउने तरिका - Khabar Nepali
होमपेज / जीवनशैली / के तपाईं पढेको कुरा लामो समयसम्म सम्झिन चाहानुहुन्छ ? यस्ता छन् स्मरण शक्ति बढाउने तरिका
के तपाईं पढेको कुरा लामो समयसम्म सम्झिन चाहानुहुन्छ ? यस्ता छन् स्मरण शक्ति बढाउने तरिका
आजकल धेरैजसो बिधार्थीहरु सामाजिक संजाल, मोबाइल, ल्यापटप जस्ता कुराहरु मात्र चलाउने हुदा उनीहरुको पढाईप्रतिको ध्यान विकर्षण हुदै गईरहेको छ । पढाई मात्र नभएर यस्ता कुराहरुले मानसिक रुपमा पनि निरन्तर असर पारिरहेको हुन्छ । आज हामी यहाँ बिधार्थीहरुले आफुले पढेको कुरा कसरी याद गर्ने भन्ने बारे चर्चा गर्न गईरहेका छौ ।
के तपाईं लामो पढेको कुरा लामो समयसम्म सम्झिन चाहानुहुन्छ ? कल्पना गर्नुहोस् त ज्ञानगुनका धेरै कुराहरु मस्तिष्कमा टिपाउन एक दुई पटक पढेर धेरै समयसम्म सम्झिरहन सकेमा कति आनन्द हुन्थ्यो होला ! चाहे घरमा काम गर्ने गृहिणी होउन् वा कक्षा–कोठामा पढाउने शिक्षक, अथवा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी वा एक व्यापारी नै किन नहोउन्, सबैलाई आफ्नो स्मरणशक्ति बढाउने तीब्र इच्छा, अभिलाषा पक्कै हुन्छ ।
जन्मेदेखि नै हाम्रो मस्तिष्कको बढ्ने क्रम जारी हुन्छ । बच्चाबच्चीको एकवर्षे कालसम्म छातीको परिधिभन्दा टाउकाको परिधि तीन सेन्टिमिटरले ज्यादा हुन्छ । बच्चाबच्ची जन्मिँदा टाउकाको परिधि ३५ से.मी., तीन महिनामा ४० से.मी., सात वर्षमा ५० से.मी. एवं १२ वर्षमा ५२ से.मी. हुन्छ । टाउकाको परिधि बढ्नु भनेको मस्तिष्कको कोषको संख्यामा पनि बृद्धि हुनु हो ।
आफूले गरेको काममा प्रथम भई नाम, दाम कमाउन कसलाई रहर हुँदैन र ? स्मरण शक्ति एकैछिन, एकै दिनमा कहिल्यै बढाउन सकिन्न । यसको लागि निरन्तर मिहिनेत एवं परिश्रम गरिराख्नु पर्छ । काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ एवं कुनै पनि काम भित्री मनबाट नै इख लिएर गर्नुपर्छ ।